आमचोक गाउपालिकाका मियर अशोक राई संग बिएनएन अनलाईनका समाचारदाताले गरेको कुराकानी
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने अख्तियारको अधिकार खोसिँदै
प्रहरी र विप्लव समूहबीच भिडन्त, दुईको मृत्यु
एसइईको पूरक परीक्षा मिति सर्‍यो
स्थानीय तहका ६ वडामा तालाबन्दी, दुईमा शंकास्पद वस्तु फेला
बोर्डिङ स्कुलको बस दुर्घटना
यसरी पाए मेस्सीले रेड कार्ड
आमचोक गाउपालिकाका मियर अशोक राई संग बिएनएन अनलाईनका समाचारदाता मदन अधिकारीले गरेको कुराकानि यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) सर लाई बिएनएन अनलाईनमा स्वागत छ ।
धन्यवाद मदन सर
२) विद्यार्थी जीवनदेखि राजनितीमा लाग्नु भयो ? यसकाो मुख्य कारण के थियो ?
जव, ४६ र ४७ को जुन मुमेन्ट चलो देशमा एउटा माहोल समेत चलेको थियो । त्यसमा म जानि नजानी राजनितिमा होमिए छु । म ९ कक्षा पढ्दा देखीनै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को जिल्ला कमिटीमा मैले काम गरे बाल्य काल देखिनै समाज रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्ने गर्दथियो र यो राजनितीक बाट मात्र हुन्छ जस्तो लागेर म विद्यार्थी जीवनदेखि राजनितीमा लागेको हो ।
३) आमचोक गाउपालिकाको अध्यक्ष भएको लगभग ३ वर्ष भएको छ । जनप्रतीनिधी आएपछात गाउपालिकाका सुखत पक्ष केके हुन् त ?
यस प्रश्न मलाई भन्दा पनि बढि जनतालाई राम्रो संग जानकारी छ । त्यस कारण यो प्रश्नको जवाफ म स्थानीय जनताहरुलाई नै सुम्पिन चाहन्छु ।
४) हाल चलि रहेको गाउँसभाको विषयमा केही जानकारी दिनुन् सर !
हाल ७६।७७ को गाउँसभा चलिरहेको छ । गाउपालिका लाई राम्रो प्रभाव पर्ने खालको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । १० गते गाउँसभा उद्घटन गरिएको छ । समयमा नीति कार्यक्रम र बजेट पेश भएका छन् । र त्यसको छलफल १३ गते देखि सुरु हुने सबै स्थानीयमा बिएनएन अनलाईन बाट जानकारी गराउन नि चांहान्छु । र सबैको सल्लाह सुझावमा बजेट पारित हुन्छ जस्तो लागेको छ ।
५ गाउपालिकाको बजेट विनियोजन कतिको बजेट विनियोजन भएको छ ? यस विषयमा समेत बताइ दिनुन् ?
अहिले यस गाउपालिकाको बजेट तीस करोड पैंतालीस लाख छैसठी हजारको सरदरमा छुट्टिएको छ । त्यसमा ससर्थ अनुदान १३ करोड छुटिएको छ । प्रशासनिक तर्फ ७ करोड छुट्याइएको छ । र बिकाश बजेटमा १० करोड छुट्याइएको छ । तर, यश १० करोड बजेट गाउपालिकाको लागि प्रयाप्त भने भएको छैन । यस विषयमा मैले प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकार समक्ष समेत कुरा राखेको छु । र जति स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ त्यतिनै प्रदेश तथा केन्द्र सरकार बलियो हुन्छ भन्ने बिषयमा मैले जोड दिएको छु र देश समृद्ध नेपाल समेत यसै अवधारणाले मात्र पूरा हुने छ ।
६) हजुरको लगभग तेस्रो कार्यकालमा चल्दै गर्दा हजुर अन्य नगरपालिकाहरुको तुलनामा चर्चामा हुनु भएको छैन किन होला ?
यसको दुइटा कारण हुन छ । एउटा मेरो प्रत्यक्ष मिडिया संघ पहुच नभएकाले र दोस्रो म मिडिया बाजी गर्नु भन्दा काममा बढि समय दिने गरेकोले म मिडियामा आउन सकिरहेको छैन् ।
६ गाउपालिकाको भाबि योजना के होलानि ?
गाउपालिका भाबि योजना आमचोक गाउपालिकालाई नमुना गाउपालिका बनाउने हो किनकी मैले कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने स्थानीयको आयआर्जनमा बृद्धी गर्नु र उत्पादनमा जोड दिनु हो र भौतिक पुर्वधार बिकाशमा मुख्य प्रथमिक्ता दिनु पनि हो । त्यति मात्र नभएर गाउपालिकाको दस्ताबेज निर्माणमा म लागिरहेको छु । त्यस्तै हरेक कुराको गुरु योजना र डिपिआर बनाउने कुरामा गाउपालिका लागिरहेको छ । धेरै ओटा गाउपालिका हरुले आफ्नो भिलेज प्रोफाइ बनाएका छैनन् तर हाम्रो गाउपालिकालै पहिलो बर्ष नै भिलेज प्रोफाइल बनाउन सफल समेत भएको छ । त्यस्तै कृषिको गुरु योजना तथा पर्यटनको समेत गुरु योजना निर्माण गरि सकेको छ ।
८ नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको कल्पना सङ्गै टेक्नोलोजीको प्रमुख प्रयोग भनेको छ तर यश गाउपालिकाले टेक्नोलोजी लाई कसरी लिएको छ त ?
सुचना प्रविधिमा बिकाश र प्रविधिमा बिकाश गर्ने कुरामा निकै कसरत गरि रहेका छौ । जस्तै प्रतेक वडामा हामिले इन्टरनेट पुर्याएका छौ । गाउपालिकामा हामिले सिसि क्यामेरा जडान गरेका छौ । गाउपालिकामा हामिले इ हाजिरीको व्यवस्था गरेका छौ । गाउपालिकाकै ४३ ओटै विद्यालयमा इ हाजिरिको व्यवस्था गर्ने तयारिमा समेत रहेका छौ । र त्यसको लागि मैले बजेट समेत बिनियोजना गरि सकेको छु । र त्यसका साथै छिटै यश गाउपालिका पेपर लेस गाउपालिका समेत हुँदै छ र त्यो समेत मेरै कार्यकालमा हुने यश मिडिया मार्फत बताउन चाहन्छु ।
९) हजुरलाइ यस गाउपालिकाको बिकास कानिमत्त हिड डुल गर्न सहज होस् भनेर गाउँ सभाले गाडि खरिदका निमित्त रकम समेत बिनियोजन गरेको थियो तर हजुरले गाडि खरिद गर्नुको सट्टामा एम्बुलेन्स खरिद गर्नु भएछनि ?
पक्कै पनि हाल मैले यश भेगमा मेरो पावरको आधारमा गाडि खरिद गरे भने मैले यश भेगका मानिसलाइ बिर्सिए जस्तो लाग्छ किनकि हिजो म कहाँ बाट आए भन्ने कुरा मैले भुल्नु हुदैन र मैले बिलासि जीवन बिताउदै गर्दा यश गाउपालिकाका मानिस रोगले छट्पटिए भने मैले यश गाउपालिकामा जितेको केनै अर्थ लागोर त्यसैले मैले गाडि खरिद गर्नुको सट्टामा एम्बुलेन्स खरिद गरेको हु ।
१० ) हजुर हिजोको दिनमा गाउपालिका अध्यक्षमा जित्तै गर्दा यश भेगको विकाशको तुलना गर्ने हो भने जिरोको अवस्थामा थियो र हाल यश भेगमा बिकाशको मुल फुटेको देख्न सकिन्छ यसलाइ हजुरले कसरी लिनु भएको छ ?
हो पकै पनि बिकाशको कुरामा नेतृत्वले विकाशका कुरा गर्ने हो । र हामी यश गाउपालिकाको नेतृत्व भै सकेपश्चात हामिले भिजन बनाउने कुरा र नीति बनाउने कुरा हुन्छ । त्यसको कार्वन्ययन गर्ने कुरा चाहि कर्मचारीको हो । त्यस कारणले हामी नीति निर्माणमा अलिकति मेहनतनै गरेका छौ । र तपाइले यो जसरी जिरोमा थियो भन्नु भयो सोभाबैले यो सदरमुकामको टाढा मदेशको नजिक तर हामी लाई दुध कोशि र अरुण नदिले चाहि छेकिएको छ हुनत हाम्रो यो सम्पति पनि हो तर आमचोकको लागि एउटा अभिसाप जस्तै बनेको छ । र यो चाहि एउटा दुर्गम गउपालिका हो । र त्यस कारणले समेत यश भेगमा काम गर्न धेरै नै कठिन भयो । बाटोघाटो खानेपानि शिक्षाका कुरा स्वास्थ्यका कुराहरु भवन निर्माणका कुराहरुमा धेरै नै कठिन भयो र अझै पनि यो कठिन छ तर पनि अव हामी निरास भएर हैन उत्साहित र जागरुक भएर निराशालाइ सक्तिमा बदलेर हामी संग भएका स्रोत र साधनलाइ सहि ढङ्गले प्रयोग गरेर यश गाउपालिकाको विकाश गर्ने क्रममा एक भएका छौ र आमचोकको विकाश यसरी हुनुमा यो अशोक राइको मात्र यसमा हात छैन यहाँ नगरीक समाजको उतिकै भुमिका छ । राजनैतिक दलको पुर्ण सहयोग मिलेको छ । यश गाउपालिकामा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै छैन र यहाँ हामी एक भएर लागि परिरहेका छौ । र कर्मचारी साथिको पनि भरपुर सहयोग मिलेको छ । तेहि भएर हामी सफल छौ ।
११ हाल केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्म प्रतिपक्षले आफ्नो छाया सरकार गठन गरेको छ त्यसैलाइ आधार मानेर हेर्ने हो भने यश गाउपालिकामा प्रतिपक्षको कस्तो भुमिका रहेको छ र हजुरले प्रतिपक्षलाइ कसरी सन्तुलनमा राख्नु भएको छ ?
पहिलो कुरात प्रतिपक्षि साथिहरुको रचनात्मक साथ र सहयोग रहेको छ । र उहाँ हरुले यश सरकारले के गर्दैछ भनेर दुरपिनले हेरी राख्नु भएको छ होला र हामिले पनि तेति धेरै गलत नगरेको हुनाले उहाँ हरुले पनि हामिलाइ खन्डन मन्डन असहयोग गर्ने भन्ने छैन र म सबैको अस्तित्व स्विकार्नु पर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो । कसैले पनि अर्काको अस्तित्व सुइकार गर्न सकेन भने उस्ले समेत आफ्नो अस्तित्व सुइकार्न सक्दै न । त्यसैले सह अस्तित्वको राजनैतिक गर्नु पर्छ निशेधको राजनिति गर्न हुन्न । सहि कुरालाइ फलोअप गर्नु पर्छ र गलत कुराको खन्डन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हो र प्रतिपक्ष साथि हरुलाइ म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
१२) जस्तै सर हजुर पनि युवानै हुनुहुन्छ र आम आमचोक बासिलाइ यो गौरवको करा समेत हो तर हजुर युवा हुदा हुँदै युवाकै निमित्त कस्ता योजनाहरु रहेका छन् केही बताइ दिनुन् ।
विशेषत म युवा हरुलाइ कृषि संग जोड्न चाहन्छु । यहाँ मैले ठुल ठुला हस्पिटल खोल्छु हजारौ मान्छेलाइ रोजगार दिन्छु ठुला ठुला सिमेन्ट फ्याक्टरी खोल्छु भन्ने खालका मैले गफ दिएर हुदैन । यश ठाउमा केछ सम्भवना भन्दा यहा सामान्य पर्यटनको सम्भावमा रहेको छ । त्यसलाइ प्रमोशन गर्नु पर्छ । अत्याधिक मानिस कृषिमा रहेको छ । कृषिमा मैले एउटा ठुलै सपना बोकेर एउटा अभियान समेत सन्चालन गरेको छु । जस्तै चिया खेति सुरु गरिएको छ । नगदे बालि फल फुल खेतिको बिस्तार सुरुवात भएको छ छ र त्यहा भोलिका दिनमा हजारौ युवाले रोजगार पाउने अवसर समेत रहेको छ । यसरी फलफुलको प्रमोट गर्ने लक्ष समेत रहेको छ । यसै वर्ष देखि सरकारी कृषि फमको समेत सुरवात गरिएको छ । यसमा चाहि पि पि पि मोडल बाट साझेदारीमा लाने भन्ने हाम्रो लक्ष रहेको छ । यसरी मैले युवा हरुलाइ जोड्ने कोसिस गरेको छु र तत्काल देखिने गरि चाहि मैले युवा हरुलाइ खेलकुदमा जोडेको छु । यसले युवाहरुलाई व्यस्त बनाइ बिभिन्न सामाजिक अपराध हरुलाइ न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु । त्यस्तै हाम्रो गाउपालिका निजामती सेक्टरमा माथ्लो ओहओदामा पुर्याउनु पर्छ भनेर लोकसेवा आयोगको तयारी गराउने भनेर केही बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । किन भने म अहिले आमचोकमा राजनैति गर्दा दुख पाई रहेको छु तर मैले जस्तो दुख अवका पुस्ताहरुले पाउनु हुदैन भन्ने मेरो सोच समेत रहेको छ ।
१३) हजुरले युवा संगसगै महिला दिदी बहिनिका हितका लागि समेत केही योजनाहरु ल्याउनु भएको छ त्यस बिषयमा समेत केही बताइ दिनुन ।
महिलाका निमित्त हामिले निरन्तर महिला ससक्तिकरण कार्यक्रम राखेका छौ सीप मुलक कार्यक्रम राखिएको छ । यहाँ लघू महिला उद्योग सन्चालन गर्ने भनेर मैला हरुलाइ प्रमोशन गरि राखिएको छ । बर्से्नि महिला स्वास्थ्य सिभिर समेत सन्चालन गरीदै आएको छ जसमा आमचोकका महिलाहरुको आङ खस्ने समस्या जुन छ त्यसलाइ निशुल्क उपचार गराइएको छ । त्यसमा ६० जना भन्दा बढीले निशुल्क अप्रशन सेवा यसै पटक लि सक्नु भएको छ । महिला सहकारीलाइ प्रमोट गरीएको छ ।
१४) आमचोक गाउपालिका राम्रो गाउपालिका जुन यश गाउपालिकाको नारा छ यश नाराका बिषयमा हजुरले केही बताइ दिनुन ।
नारा भनेको एउटा अर्को शब्दमा परिकल्पना पनि हो । यो नारा हाम्रो परिकल्पना हुन सक्छ । र यो नारालाइ हामी सार्थक बनाउन अहोरात्र लागि पर्ने छौ । र आगामि दिनमा आमचोक गाउपालिकालाइ समृद्ध आमचोक गाउपालिका बनाउने छौ । तर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो बजेट भने अपुग रहेको छ ।
१५) हामी लगभग अन्त्य अन्त्य तर्फ आएका छौ अन्त्य तर्फ आउदै गर्दा हजुरले भन्नु भयो कि हाम्रो बजेट केही अपुग रहेको छ तर हजुरले त्यसो भन्दै गर्दा गाउपालिकाको बिकाश क्रम तिब्र विकाश देख्न सकिन्छ जता ततै बाटो बिद्धुत खानेपानी, शिक्षा पुगि राखेका छन् कतै पुग्ने क्रममा छन् यसलाइ चाहि हजुरले कसरी व्यवस्थापन गरेर यतिको विकाश गर्नु भएको हो त ?
यस प्रश्न गम्भीर प्रश्न समेत रहेको छ किनकि सिमित स्रोत साधन हुदा हुँदै असिमित आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न सजिलो कुरा हैन तर सिमित साधनलाइ अधिकतम उपभोग गर्न सक्नु कार्य कुसलताको एउटा परिचय हो। विशेष तपाइको बितरण प्रणालिमा र खर्च गर्ने विधी प्रणालिमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । त्यहि सिद्धान्तमा लागि रहेको छु ।
धन्यवाद सर हजुरलाइ हजुरको अमूल्य समय दिनुभएकोमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर ।
एकै छाकमा पाक्छ २५ किलो चामल
भारतको दवाबपछि तरकारीको विषादी परीक्षण नगरिने सरकारको निर्णय
आहा ! बालापनको त्यो दशैँ
कति मिठा थिए त्यसबेलाको दशैँका पलहरु । घटस्थापना अघिनै हाम्रो बाबाले पुरै घर कमेरो र रातो माटोले रङ्...
पाँच घरमा लुटपाट र चोरी
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा पाँच घरमा चोरी भएको छ । वडा नं २ भुर्कीका कैलु चौधरी, सुन...
आमचोक गाउपालिकाका मियर अशोक राई संग बिएनएन अनलाईनका समाचारदाता मदन अधिकारीले गरेको कुराकानी यस प्रका...
बिराट न्युज नेटवर्क द्वारा संचालित
सम्पर्क ठेगाना: इटहरी, सुनसरी
सम्पर्क नम्बर 025-589018
© 2018 Birat News Network (P) Ltd. All Rights Reserved | Powered by EASY ACCESS